Sary an'i Me Kyeoung Lee avy amin'ny fivarotana manodidina | Famoronana an-tserasera
ny orinasa ananantsika eo amin'ny manodidina anay, ilay fivarotana kely nandalovan'ny taranaka maro, dia hanjavona. Ary izany no antony itiavan'ny mpanakanto koreana tatsimo haka azy ireo amin'ny sary hosodoko mba tsy ho very tadidy sy ora.
Me Kyeoung Lee no nifidy ity lohahevitra ity mahalala am-pahendrena fa mihamaro hatrany ny tsy hita ireo fivarotana kely ahafahantsika mividy zavatra. Ary ilay izy dia nandoko nandritra ny 20 taona mahery ny magazay isan-karazany izay angoninay anio manaraka ireto andalana ireto.
Ny tolakandro tampoka dia nahatonga azy hiverina tamin'ny iray tamin'ireny fivarotana zorony kely izay nahasarika azy ny majia natsangana isaky ny zorony.
Noho izany ny aingam-panahy handoko ireo magazay kely ireo izay mihidy bebe kokoa ary maro amin'ireo sary hosodoko no lasa "fiainana tsaratsara kokoa". Ny iray manokana dia tadidy tsara, satria fantany ny tompony, vehivavy 80 taona.
Nanapa-kevitra ihany izy tamin'ny farany hanidy azy io taorian'ny 50 taona mahery. Noho izany Entiko any amin'ny iray amin'ireo canvases-ny izany ary toy izany koa amin'ny maro amin'izy ireo izay nandray anjara tamin'ny fiarovana ireo magazay kely zoro ireo.
Teknikan'i Lee ambanin'ny sary hosodoko amin'ny sosona maro misy tsipika faran'izay tsara amin'ny sary. Izy dia afaka manambatra ny alokaloka acrylic 28 samihafa amin'ny asany rehetra.
Ny tanjona dia ny hanana ireo loko miloko ireo loko nefa tsy miseho ho "matevina" loatra, toy ilay majika mipoitra ihany iray amin'ireo fivarotana izay ahitam-potoana isaky ny zoro.
Ary i Lee dia afaka mitondra antsika eo imasontsika tsirairay amin'ireo antsipiriany majika ireo rehefa manomboka mijery ny sary hosodoko isika. Ireo boaty legioma na bisikilety aza dia mijanona eo ivelany.
Mandao anao izahay miaraka amin'ny tranonkalanao amin'izay ianao afaka manakaiky ny sisa amin'ny asany mahatalanjona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ity mpanakanto ity dia misambotra ny majika amin'ny fivarotana kely nentim-paharazana any Korea Atsimo